Arzantina: ‘Diaben’ny Cap (Kasikety)’, Hetsika iray Tsy Hangina Manoloana Ny Herisetra Mahafaty Ataon’ny Polisy · Global Voices teny Malagasy
Arzantina: ‘Diaben'ny Cap (Kasikety)’, Hetsika iray Tsy Hangina Manoloana Ny Herisetra Mahafaty Ataon'ny Polisy
Nandika (en) i Alison Rustand
Voadika ny 18 Mey 2016 16:49 GMT
Sary avy amin'ny pejy Facebook natao ho an'ny rehetra “March of the Cap”.
Fanamarihan'ny mpandika: Cap (fiteny an-dalanbe ho an'ny espaniola) dia midika hoe polisy, ny Gorra indray midika ho kasikety ho antsika Malagasy
Nandritry ny sivy taona izao, isaky ny 20 Novambra dia mitohy hatrany ny làlan'ny Diaben'ny Kasikety mamakivaky ny tanànan'i Cordoba ao Arzantina, ao amin'ny fon'ilay firenena. Hetsika iray io ho fanoherana ny “tifitra-ankitsirano” sy ny daroka ataon'ny polisy, ny filàm-baniny ary ny fanavakavahana iainan'ny olona amin'ny fitandroana ataon'izy ireo.
Avy amin'ny –“cap”– fiteny eny an-dalambe amin'ny teny Espaniola hilazana ny polisy no nakàna ny anaran'ilay hetsika, ary amin'ny ankapobeny dia mihevitra ny hanao fanamby amin'ireo fanararaotana amin'ny fampiharana ny lalàna. Araka ny amaritan'ireo mpikarakara azy hoe :
Izahay no diabe manohitra tanteraka ny fanjakana polisy, izay manilikilika, mamoritra, mila vaniny, mampitondra takaitra ary mamono. #MarchadelaGorra
Ao anatin'ny matoan-dahatsoratry ny tranonkalam-baovao Página 12 (Pejy 12), manazava misimisy kokoa ireo antom-pisian'ilay diabe i Esteban Rodriquez Alzueta, mpanoratra sady mpikaroka :
Diabe manohitra ny polisy ity, saingy koa manohitra ny fijerem-potsiny sy faneken'ny manodidina ny zavatra mitranga. Rehefa tsy misy dikany ara-tsosialy dia tsy misy dikany ny polisy, entina hilazàna fa ao an-damosin'ny herisetra ataon'ny polisy dia misy ny fitsaràna an-tendrony ara-tsosialy. Ny henatra izay asisik'ireny fitondrantenan'ireo mpandraharaha ireo isanandro dia mamorona toedraharaha manamora sy mamadika ho azo ekena ny fisiana tsikelikely ary mahery setran'ireny manamboninahitry ny polisy ireny any amin'ireo tanàna tena mahantra.
Nampiany antontanisa ihany koa, izay manamafy ny fitomboana tafahoatran'ny fitànana am-ponja fahatany ao Cordoba tato anatin'ny taona vitsy farany :
Tamin'ny 2011 tao amin'ny faritanin'i Cordoba, nisy fitànana olona 73.100 noho ny fanamarinana ny amin'izy ireo, izany hoe nisy fisamborana olona 2.209 natao isaky ny olona 100.000. Mihoatra lavitra noho ny antsasak'ireo nitranga tao an-drenivohitra. Lehilahy ny enina amby valopolo isanjato amin'ny olona niharan'ireny fomba fanao ireny. Fitopolo isanjato no tanora latsaky ny 35 taona, ary ny antony nomen'ny polisy hoentina hanamarinana ny hetsika nataony dia hoe “fivenjivenjena”.
Nisarika ny saina hijery ireo tranganà fanararaotana samihafa nataon'ny polisy ny pejy Facebook “Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos (Fiarahamientan'ny Tanora ho an'ny Zontsika). Iray amin'ireny no milaza ny tantaran'i Daniel Robles, izay niala sasatra tao Cordoba ary notànana tsy an-drariny nandritry ny 40 ora ho “nikasa handroba”. Tranga iray hafa ny an'i Nyko Nadal, zazalahy 16 taona izay nohazaina sy notifirin'ny polisy, na dia tsy nitondra fitaovam-piadiana aza izy tamin'izay fotoana izay, rehefa nandray fiarakaretsaka. Na ny tranga nahazo an'i Christian Guevara, izay maty tany ampitazonana azy taorian'ny daroka nataon'ny polisy taminy, ny polisy izay niezaka taty aoriana hanafina ny marina tamin'ny filazana fa namono tena izy.
Ny tambajotran'ireo mpanao gazety Cosecha Roja (Fijinjàna Mena) dia namoaka ihany koa tranga mitovitovy amin'ireny herisetra mahafaty matetika ataon'ny polisy ireny:
Nosemporin-dry zareo tao anatin'ny ranom-potaka maloto tao Riachuelo i Ezequiel. Notifirin-dry zareo tao anaty fiara iray i Jonathan sy Brian. Polisy iray nitifitra an'i Ramón teo amin'ny lohany noho izy niaro olona iray. Nandrahona sy nidaroka an'i Luciano ry zareo. Enina taona taty aoriana, nipoitra izy, toy ny vatana mangatsiaka tsy nisy mpitaky tao Chacarita. Novonoin-dry zareo avy any an-damosina i Mariano sy Dario. Polisy iray no namono an'i Kiki, izay niampanga azy ho nanandrana hangalatra ny fiarany.
Lasa lavidavitra kokoa noho ny resaka fitànana sy famonoana ataon'ny polisy ireo olana ireo, ka tafiditra hatramin'ireo Akany fibeazana ara-tsosialy, na ireo fonja natao ho an'ny zazalahy sy zazavavy, izay araka ny tranonkalan'ilay diabe dia tsy toerana natao hanabeazana mihitsy noho ny tsy fahampian-pitaovana any amin'izy ireny
Raha nahazo laka isantaona tao amin'ny faritanin'i Cordoba ny Diaben'ny Kasikety, tamin'ny 2015 nisy hetsika nitovitovy tamin'izany koa nitranga tany amin'ireo tanàna hafa, toa an'i La Plata, Rosario, Mendoza ary ny tanànan'i Buenos Aires, nahatonga ity diabe ity ho ny iray isan'izay goavana sy tsara karakara indrindra tany Arzantina. Tian'ireo mpikarakara hoaverina ihany koa ny kolontsaim-bahoaka ary hiampanga ny fanararaotana ara-drafitra, toy ny ilazan'ny tranonkala ofisialy azy:
Miandahy miambavy izahay. Izahay no ireo bandikely sy sipakely avy any an”-tanàna, ny dihy, ary ny kianja filalaovana baolina kitra, avy any am-ponja manerana ny firenena. Izahay no mpiasa miady isanandro hisian'ny fahamendrehana; izay mandray andraikitra amin'ny fitrandrahana, ny karama vary masaka sy ny famoretana an-kerisetra rehefa mba manohitra. Izahay no ireo mpampanofa vatana izay napetraky ny tantara hatramin'ìizay ho mpanao heloka bevava, vonoina mangingina any, darohana sy ilàn'ny mpiray tsikombakomba amin'ny governemanta vaniny miaraka amin'ireo tomponandraikitry ny fanondranana an-tsokosoko sy fanirahana anay hampanofa ny tenanay. Izahay no ireo mpianatra mitolona hanana fahalalahana, fitoviana ary fanabeazana laika ho an'ny rehetra. Izahay no ireo mpanao asatànana, mpamily, ary ireo izay tsy mamela ny Monsato [goavan'ny sehatra fambolena] hiditra an'i Cordoba ary mitolona ho an'ny fanesorana ny Porta [mpamokatra licor] aty amin'ny tanànanay. Izahay no ireo onjampeon'ny vondrom-piarahamonina misokatra malalaka, ireo media azo atao fanolo. Izahay no ireo mpiangaly mozika eny an'arabe ary ireo hetsika ara-kolontsaina. Izahay no ireo lehilahy sy vehivavy marary sy reraky ny vonoina noho ity rafitra fitiavan-tanindrazana bontolo mifangaro fanjakan-dehilahy ity, ankahalàna ny homo- lesbo- trans, ary mararin'ny famonoana ireo vehivavy sy nanova taovam-pananahana.
Ho an'ny fanambaràna tamin'ilay diabe farany tamin'ny 18 Novambra 2015, nandefa ity lahatsary ity ilay tranonkala, izay nidika ho famerenana mamaritra ilay diabe ho toy ny hetsi-bahoaka araka ny voalaza ery ambony.
Ireto ny sasany amin'ireo saripika avy amin'ny Diaben'ny Kasikety farany teo :
Maribolan'ny Instagram: Eny an-dalambe ny tolona.
T-shirt mivaky hoe: “Eo ambanin'ny kasikety tsirairay dia misy lehilahy miaraka amin'ny tantarany”.
Misoratra eo amin'ny sorabaventy, ankavia miankavanana : “Ny rariny ho an'i Rodrigo Sanchez”, “Ampy izay!!! Lucas Carranza polisy iray hafa mpamono olona!”
Maribolana Instagram : Sivy taona nanaovana diabe ho fanafoanana ny lalànan'ny fandikàn-dalàna Ho an'ny polisinareo, manohitra izahay! *mahafinaritra ny tanàna*
Raha raisina anaty kajikajy ny fandraisana makotroka azon'ilay diabe tamin'ny 2015 sy ny fanasàna mivelatra kokoa ny vahoaka, efa nanamafy sahady ny ho fandraisany anjara amin'ny Diaben'ny Kasikety manaraka ny sasany, tamin'ny alàlan'ny Twitter.
Mianiana amin'ny raiko aho fa ho isan'ny hanao ny diaben'ny kasikety manaraka
Tsy maintsy ho ao anatin'ny diaben'ny kasikety 2016/2017 aho